Torres oo ka warbixiyay sababta uu kaga fariistay kubadda cagta, isagoo doortay xiddigii ugu fiicnaa uu ka garab ciyaaray – Gool FM
Torres oo ka warbixiyay sababta uu kaga fariistay kubadda cagta, isagoo doortay xiddigii ugu fiicnaa uu ka garab ciyaaray
(Yurub) 23 June 2019. Weeraryahankii hore xulka qaranka Spain iyo kooxaha Liverpool, Chelsea iyo Atletico Madrid Fernando Torres ayaa jimcihii si rasmi ah ugu dhawaaqay in gabi ahaanba uu ka fariistay ciyaaraha kubadda cagta, kaddib markii uu muddo 18 sanno ah xirfadiisa ciyaareed ku soo qaatay.
Fernando Torres ayaa subaxnimadan Axada ah qabtay shir jaraa’id si uu sharaxaad kaga bixiyo sababaha ku kalifay inuu ka fariisto ciyaaraha kubadda cagta isagoo da’diisu tahay 35 iyo guulihii uu ka gaaray mustaqbalkiisa kubada cagta.
Torres ayaa u doortay saaxiibkiis hore kooxda Liverpool ee Steven Gerrard inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican uu ka garab ciyaaro mustaqbalkiisa, isagoo ka doorbiday xiddigo badan ay ku soo wada ciyaareen kooxaha Chelsea, Atletico Madrid iyo xulka qaranka Spain.
“Ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee aan la ciyaaray xaqiiqdii waa Steven Gerrard, wuxuu ahaa ciyaaryahan weyn, hogaamiye dhab ah, Gerrard wuxuu ii dhameystiray ujeedooyinkeyga iyo wax walba, waxaan qabaa inaan gaaray qaab ciyaareedka ugu fiican mudadii aan ka garab citaaray”.
“Waxaan la ciyaaray Gerrard seddex xilli ciyaareed iyo bar, waxaana rajeynayaa hadii ay soo laabanayaan maalmahaas, xitaa hadii ay ahaan lahayd hal daqiiqo, waxay ahayd waqti fiican oo nolosheyda ah”.
Intaas kaddib Fernando Torres ayaa ka hadlay sababta uu xiligan kaga fariistay ciyaaraha kubadda cagta wuxuuna yiri:
“Hadii aan runta ka hadlo, marwalba waxaan doonayay inaan muujiyo heer isku mid ah xirfadeyda kubadda cagta, waxaan qabaa inay fiican tahay inaan xadido xirfadeyda, marka aan dareemo inaanan ciyaari karin”.
Christian Eriksen oo doortay koox ka ciyaarta horyaalka Premier League kadib markii uu waayay Real Madrid.